ဂါလာစတာရီကလပ်ဥက္ကency္ဌအဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ Ozan Korkut သည် TRT ရေဒီယို ၁ ၏ guest ည့်သည်ဖြစ်သည်။ Fatih Terim အားသူ၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကတိတော်၌အခွင့်အာဏာပိုမိုပေးသင့်ကြောင်းအလေးအနက် ပြော၍ Ozan Korkut မှအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“Fatih ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ Galatasaray ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါ Galatasaray Sportif AS မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းချင်ပါတယ်။ နည်းပြဆရာအတွက်ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။ သမ္မတမဟုတ်ဘဲအားကောင်းသည့်သမ္မတသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဂလာတိဆာရာအတွင်းမှလာသူသမ္မတသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖွဲ့ရှိသည်။
Mustafa Cengiz ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝေဖန်သူ Ozan Korkut၊ “Mustafa Cengiz အုပ်ချုပ်ရေးကိုငါအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အထွေထွေညီလာခံထဲမှာဆောင်းပါး ၃ ခုပြောခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကဖော်ပြသောစီမံကိန်းများမည်မျှရှိခဲ့သနည်း။ စီမံကိန်း ၃၀ အနက်မှအနည်းငယ်သာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၀ င်ငွေကိုမရရှိလျှင်လွှဲပြောင်းမည်မဟုတ်။ အနာဂတ်အတွက်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲထားသနည်း။ ဤပစ္စည်းများကိုမဖြည့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မထုတ်ဝေခဲ့ပါ။ အသုံးပြုခဲ့သည်။
BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO868 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERBAHİS489 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBABA138 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO618 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI!
12 Comments on BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’
ÖZGE December 2, 2020 at 2:10 pm
ŞAFAK December 5, 2020 at 9:00 am
SELİM December 6, 2020 at 5:20 am
SAMET SANCAR December 6, 2020 at 7:10 pm
SALİHA DİLEK December 9, 2020 at 1:00 pm
KÜBRA December 9, 2020 at 8:30 pm
SEVAL December 9, 2020 at 10:40 pm
ÇAĞDAŞ December 10, 2020 at 1:20 am
restbet canlı casino bence tercih etmeyin ben pek memnun kalmadım
YUNUS EMRE December 11, 2020 at 7:50 am
DENİZ December 12, 2020 at 2:50 pm
ÖZLEM December 12, 2020 at 5:40 pm
ZEYNEP December 13, 2020 at 3:10 am